> Resource > Mac > Hel Flip4mac Best Kale ee OS X Mavericks
Flip4Mac waxaa aad loogu yaqaanaa awood u leeyahay inuu kordhiyo QuickTime si ay u taageeraan codecs windows media iyo qaybaha on Mac. Si kastaba ha ahaatee, hagaajinta dhawaan Mavericks ayaa keenay in badan oo dhibaato in dadka isticmaala, waxaad tidhaahdaan, Flip4Mac oo ku guul daraysata in ay si fiican u shaqeeyaan. Wixii su'aalo ah dadka isticmaala ku saabsan Mavericks, halkan waxaad ka heli kartaa jawaab aan ka hooseeya.
Oo weliba, Waxaan idin siin doonaa 2 xal si wax ku ool u xaliyaan dhibaatooyinka. Wixii xal 1, waxaad isku dayi kartaa ciyaaryahan video powful la jaan qaada Mavericks for loo maqli karo. Wixii xal 2, kaliya aad u baahan si loogu badalo video ay u Mavericks oo ay taageerayaan qaab oo la ciyaaro QuickTime. Faahfaahin dheeraad ah, fadlan akhri hoos ku qoran.
Su'aalaha ku saabsan Flip4Mac Mavericks
Xalka 1: Isku day Wondershare Player on Mavericks
Xalka 2: Beddelaan qaabab video ay taageerayaan QuickTime
Su'aal:. Ka dib markii ay ku rakibidda Mavericks, Ma ciyaari kartaa noocyo badan oo warbaahinta la QuickTime dambe
Haddii aad la casriyeeyay si Mavericks, inta aan ka ogahay, files AVI ma shaqayn karo QuickTime.
Su'aal:. My QuickTime uma shaqeeyo ka dib markii la xariirta nidaamka OS X Mavericks
verison hore ee Flip4mac waa in aynan Mavericks. Haddii aad u cusboonaynta in verison ugu dambeeyey, ay u shaqayso. Laakiin waxaa jiri doona watermarks audio, oo waa lagu ganaaxi doonaa saareen watermarks ah. Oo weliba Perian kaas oo ahaan ka duwan FlipMac isticmaalo,, weli ma shaqeeyaan Mavericks.
Su'aal:. Waxaan updated in Mavericks, laakiinse anigu uma aan ku eegaan karo wax files AVI, wmv la Flip4Mac
jawaab rasmi ah laga Apple waa in Apple interfaces mar dambe la QuickTime mar dambe ku Mavericks, Bal eeg si Quick aan la files Windows Media shaqeyn doonaan.
Su'aal: Ma jirtaa aa qaab dhismeedka waqtiga loo sii daayo filasho hagaajinta cusub ee QuickTime?
Apple ayaa dadka ma siin jawaab qeexan.
Wixii xal 1, waxaan idinku talinaynaa in ay isku dayaan Wondershare Player sida kale Flip4Mac ah. Fadlan akhri macluumaadka hoose.
Badiilka Flip4Mac, Wondershare Player, waa Mavericks taageeray.
Ku raaxayso videos si xor ah oo aan xad qaabab. Ciyaaryahanka ayaa ku dhowaad dhammaan oo ka mid ah qaabab video caanka ah taageertaa. Si kastaba ha ahaatee, QuickTime kaliya taageeraa yar qaabab video, sida MP4 ama MOV.
Free iyo Easy in ay isticmaalaan. Waxaad ka walwali karaan oo ku saabsan barashada sida loo isticmaalo software cusub. Its interface si sahlan loo -use si guul ah ka saari doonaan dhamaan inta ku quseysa.
Just free download Wondershare Player inaad ku raaxaysatid videos on Mavericks.
Sidaas, waxaad lama dhibayay rakibidda ciyaaryahan kale oo cusub ku Mavericks. Waxaad u baahan tahay oo kaliya si loogu badalo aad videos in qaabab ay caawinayso aad QuickTime, tusaale ahaan, MOV ama MP4. Halkan Wondershare Video Converter u Mac , sida kale Flip4Mac ah, waxay kuu ogolaanaysaa inaad badalo file kasta oo warbaahinta suuqa kala ah in aad ku guuldareysato inay ka ciyaaro Mavericks. Sidoo kale waxaad ka bedel kartaa videos gediyay la iMovie.
3 tallaabo ha ku gartaan si loo sameeyo qaab beddelidda qaabka.
Step1. Import video files si Flip4Mac this u Mavericks. Kaliya si fudud in aad jiidi karaan jeedi faylasha diirada video in app this.
Step2. Dooro QuickTime MOV sida qaab wax soo saarka. Sida user kasta Mac ogyahay, MOV si buuxda u la jaan qaada QuickTime. Sidaas, waxaan si toos ah u dooran karaan MOV sida qaab wax soo saarka halkan. Tag hoose ee Murayaad this app, oo waxaad halkaas guji qaab icon ah. Isla markiiba, daaqad socod muuqan doonaa. Markaasay aad u baahan tahay si ay u doortaan "MOV" ka "Video" category.
Step3. Bilow diinta video on Mavericks.You kaliya tagi kartaa koonaha midig ee suuqa, iyo ku dhufatey "Beddelaan" badhanka si ay u bilaabaan diinta video.